के अर्को मेस्सी भेट्ला बार्सिलोनाले ? | Ratopati
के अर्को मेस्सी भेट्ला बार्सिलोनाले ?
स्पेनिस महारथी बार्सिलोनाले आफ्ना महान खेलाडी कप्तान लियोनल मेस्सीको विकल्प खोल्न थालेको छ । १५ बर्षदेखि बार्सिलोनामा खेलिरहेका अर्जेन्टिनी स्टार मेस्सीको विकल्प को होला ? भन्ने खोजीमा बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्तोमेउ खुबै लागिपरेका छन् । सन् २००४ देखि बार्सिलोनाको सिनियर टोलीमा खेलिरहेका मेस्सी अहिले ३१ वर्षका भए । उनी अहिले पनि बार्सिलोनाको मुख्य हतियार हुन् । यो हतियार कति र कहिलेसम्म चल्छ भनेर बार्सिलोना विचार गर्दैछ ।
अध्यक्ष बार्तोमोउले मेस्सीको स्थान परिपूर्ति गर्ने खेलाडीको खोजीमा आफू लागि रहेको बताए । एक अन्तर्वार्तामा बोल्दै उनले मेस्सीको बढ्दो उमेरलाई ख्याल गर्दै उनको दीर्घकालीन विकल्प खोजी गर्न थालेको बताएका हुन् ।
‘मेस्सीले एकदिन सन्यास लिनेछन् । मेस्सीको सन्यासपछि क्लबलाई उस्तै सफलता र लयमा हिँडाउन उनको विकल्प तयार पार्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अहिले म नयाँ मेस्सी खोज्न लागि परेको छु,’ बार्तोमोउले भने ।
बार्तोमेउले मेस्सीले सन्यास लिएपछि बार्सिलोनालाई कठिन पर्न सक्ने स्वीकार्दै त्यो दिन आउन नदिन आफू गम्भीर रहेको पनि बताए ।
‘बढ्दो उमेरसँगै उनले सधैं खेलिरहन सक्दैनन् । क्लबसँग मेस्सीको सम्झौता २०२१ सम्म छ । तरपनि मेस्सी हामीसँगै रहनेमा विश्वस्त छौं,’ बार्तोमेउले भने ।
संयोगवस बार्तोमोउको अध्यक्ष पदको कार्यकाल पनि सन् २०२१ सम्म छ । मेस्सीको सक्रिय खेल जीवनपछि बार्सिलोनाले उही लयमा प्राण भर्ने क्षमतवान् नयाँ मेस्सी को पाउला त्यो भने समयले बताउनेछ ।